Uyidweba njani imoto enepensile ngokwamanqanaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Uyidweba njani imoto enepensile ngokwamanqanaba?
Kubonakala kum ukuba ungazoba imoto ngoncedo lwemizobo kunye neengcebiso, kwaye nokuba kube lula ukuzoba kwincwadi yokugcwalisa imibala, umzekelo. Ndicinga ukuba kungcono ukuzoba ngokwezikim ukuze kudluliswe ukuchaneka komzobo wethu.
Umzekelo, ungazoba imoto kwi-quot; iprofayili yomgaqo-nkqubo; emva koko inxalenye kuphela yemoto iya kubonakala-icala, amavili amabini, iifestile. Ungazoba imoto phezulu. Emva koko sibonisa uphahla, i-hood, kodwa musa ukubona amavili, iifestile kunye neengcango.
Kungcono ukuqala ngamavili-jonga amanyathelo angezantsi komzobo. Ngokukhawuleza zoba izangqa ezimbalwa kwiphepha. Okulandelayo, zoba imilo yemoto njengoko ufuna. Ingaba yimoto yezemidlalo, inqwelo mafutha, ezinje nge-quot; Lada ;, okanye ilori encinci.
Kwiimoto zemidlalo, yenza umzimba ube mncinci ngakumbi, vumela umhlaba ube phantsi. Kuphela ziingcango kunye neefestile kuwo ezibonakalayo zivela ecaleni. Kodwa unokucaphula; jika uthi; imoto esuka kwi-engile eyahlukileyo.
Ezi zikhetho zinzima. Kumntwana, unokunikezela ngomatshini ngokusekwe kumxokelelwane, omele ukwahlulahlulwe ube ngamacandelo. Benza ukuba kube lula ukuzoba imoto ngamacandelo - amavili, iingcango kunye neefestile.
Inketho elula kukuzoba umatshini olula kwiprofayili. Akukho nto ilukhuni apha, kwaye umntwana akanasiphiwo talente yokudweba. Zibonele ngokwakho imizekelo embalwa:
Kodwa zoba isicaphucaphu; imoto inzima nangakumbi-kuya kufuneka ujonge ulwalamano, nokuba imigca, iinkcukacha. Nazi izifundo ezimbalwa ngenyathelo-nyathelo.
Ndinikezela ukhetho lwemoto ebanda kakhulu, engenakuthelekiswa nantoni na.Abafana bathanda yonke into entle, ngakumbi iimoto ezipholileyo .Ngoko ke akufuneki ukhethe eyona ndlela ilula, kodwa kufanelekile ukujonga kwiimodeli ezinzima, ezintle.
Sula imigca egqithileyo kunye ne-voila!
Iimoto, zahlukile. Masenze into enje. Masiqale ngesiseko esingoxande. Khumbula umbono.
Siqala ukungena emotweni yethu ephezulu apho.
Ungalibali malunga namavili.
Ndiza kuzama ukunika imizekelo yezikimu ezingekho nzima zokuzoba umatshini ngezigaba. Lungisa iphepha, irabha, nepensile. Ekugqibeleni, ngokubona kwakho, unokwenza umzobo ngombala, kodwa ungayishiya ipensile ngokupheleleyo, kwaye uyisonge nepensile elula. Ke, siqala ukuzoba. Umzekelo, nantsi imoto enje: kuqala sizoba uxande, sibeka ngokucacileyo iindawo apho aya kubakho amavili. Emva koko sinqumle iikona-apho i-Windhield iya kubakho, kwaye isemva kancinci. Siqala ukuzoba iivili. Kulungile njalo njalo, njengoko kubonisiwe kumzobo, sihamba ngamanqanaba.
Ngaphezulu - iskimu esinye ngaphezulu, ngeli xesha sizzoba i-SUV. Iskimu siyafana, siqala umzobo ngoxande, emva koko icandelo elihlanganayo kuyo nayiphi na imoto - isondo. Kwaye emva koko, njengoko kubonisiwe kumanqanaba, siphinda kwakhona onke amanyathelo. Ngethamsanqa kumzobo!
Ngoobani abaza kutsala imoto? Emva kwayo yonke loo nto, umntwana oneminyaka emi-4 ubudala unokusuka nje ajonge isikwere kunye nemijikelezo emibini aze athi le yimoto. Umntwana osele ekhulile uya kuba nakho ukubonisa into enje:
Okokuqala, uxande olungamacala omisiweyo luyaxhuzulwa, kwaye ekubeni umatshini unendawo ephezulu evulekileyo, akukho mfuneko ukubonakalisa icala kunye neefestile ngasemva - ngaphambili nje - isivalo somoya. Indawo ekhethiweyo yamavili. Iziphambili zangasemva nasemva ziyabonakala. Ukubonisa izibane ezingaphambili nezingasemva, kubalulekile ukwahlulahlulahlulahlula ngokwamaqhekeza amabini, enye kuwo iya kuba ngumqondiso wecala.
Ukongeza, kusekho uninzi lwezikimu ezinomdla kunye nezifundo. Nazi ezimbalwa nje:
Uyidweba njani imoto ye-cornfield? uyiVAZ 2121 🙂
Indlela yokudweba iloli yomlilo ngeepensile kwizigaba?
Ungayidweba njani imoto yamapolisa kunye nepensile ngokwamanqanaba?
Umzobo wemoto njani; Audiot;
Eyona moto ilula inokutsalwa kumanqanaba amane alula:
Kwavela umatshini omnandi.
Kwaye ke unako ukuzoba itrakhi (amanyathelo asibhozo aya kufuneka):
Wonke umntu uyonwabele inkqubo yokuzoba.
Ndicebisa ukuzoba enye inezinto ezilula zokuzoba imoto.
Lungisa iphepha, i-band elastic, umlawuli wepensile olula kunye neepensile ezinemibala.
Isikimu esenziwe ngezigaba somatshini wokuzoba kumanqanaba amahlanu. Umbala wemoto unokwahluka ngokupheleleyo, uvela kukuphefumlelwa.
Ngethamsanqa emsebenzini wakho kunye nakwimpembelelo!
Ukuzoba imoto ngamanqanaba, sifuna ipensile, irabha kunye nomlawuli ontsonkothileyo kwiimodeli. Kuqala kufuneka ufunde ubuchule bokuzoba kwimodeli yeemoto ezilula kwaye ngokuthe chu uqhubele phambili kwezinye ezintsonkothileyo.
Nantsi imodeli ngokulula:
Kodwa nzima ngakumbi:
Iimodeli ezingakumbi ziyafumaneka kule ndawo. Apha ungawandisa umfanekiso, uwuprinte kwaye uwusebenzise njengombala.
Zoba uxande. Ke trapezoid ngaphezulu kwayo. Ijika umzimba wenqwelo yexesha elizayo. Okulandelayo kufuneka uzobe amathayi, izibane eziphezulu. Umzobo olula unokunikwa umntwana. Nantsi into endiyifumeneyo.
Z ngoko nangoko zoba iifestile, njengakumfanekiso, iglasi.
Ucima ukugqithisa ngebhendi ye-elastic, emva koko unokuzoba ngeepeyinti okanye iipensile ezivayo.
Ungazoba imoto yezemidlalo. Umzekelo, kunjalo.
Ipeyinti yegolide inokutshintshwa ngatyheli.
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,491.